ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: Blogs helping expose Myanmar horrors (28-9-2007)
Blogs helping expose Myanmar horrors (28-9-2007)
Myanmar protest blogs
http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/09/27/myanmar.dissidents/index.html?iref=mpstoryview#cnnSTCVideo ကို click ၍ ကြည့်ရှုနားဆင်ပါ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:33 AM
ကျနော်တို. နိုင်ငံအပြောင်အလဲဖြစ်ဖို. ရက်ပိုင်မျှသာလိုပါတော့တယ်။ တက်စွမ်းနိုင်သူများ လက်တွေ. အကောင်းအထည်းမြန်မြန်ဖော်ပေးကျပါ။ ကျနော်တို. မြန်မာနိင်ငံသာတွေက အကွတ်မရှိတဲ့ ကြမ်းလို ပရမ်းပတာဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တက်စွမ်းနိုင်သူများမှ စတင်ဦးဆောင်မည်ဆိုလျှင် နောက်က လိုက်မည့်သများမှာ ဒူးနဲ့ဒေးရှိနေမှာပါ။ ကျနော်တို.လည်းတက်နိင်သမျှ လက်ကမ်းစည်ရုံ လှုံဆော်လှုပ်ရှာသွားပါမယ် ခင်ဗျာ။
ဦးညွန်.ရွှေ ခင်ဗျား။ ခင်ဗျာရဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဒီးလို စကားပြောထွက်တာကို ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို. အသက်ရှင်နေတာ ပြန်တွေပြီး မရှက်ဖူးလား ခင်ဗျား။